Sidee Tukaraq wax uga dheceen maanta? (Xog Dhab ah) – make music movie Edition: International | Video
Published On: 16 June 2012 8:00 pm Editors Choice / Wararka | By Taleex Media Sidee Tukaraq wax uga dheceen maanta? (Xog Dhab ah)
Magaalada Tukaraq waxaa hada gacanta ku haya maamulka Puntland oo ka saaray Somalidiidkii ka dib markii saaka ay qabsadeen maleeshiyaad ka amar qaata maamulka Somaalidiidka kuwaas Tukaraq soo galay ka dib markii ay u baneeyeen maleeshiyaadkii Khaatumo ee Axmed Karaash hogaaminayay.
Halkan ka dhagayso masuul Puntland oo ku sugan Tukaraq
Hadaba waxaan qormadan ku eegaynaa su’aasha ah : Sidee Tukaraq wax uga dheceen maanta?
Abaara 4:30 aroornimo ee saaka ayaa waxaa gawaadhida dagaalka ee beesha Xuddun dhextagay Axmed Karaash waxaana uu ku wargeliyay in ay diyaar garoobaan.
Seddexdii habeen ee u dambaysa waxaa afar qaybood u kala fadhiyay gadiidka dagaal oo wada adeegsanayay magaca Khaatumo balse aad u kala baqayay oo aan is dhexgali karin mana jirto taliye ciidan oo ay wada lahaayeen.
Markii ay saacadu 5:00 aroornimo waqtiga geeska Afrika ahayd ayaa waxaa la istaadhay gawaadhidii Axmed Karaash iyagoo u dhaqaajiyay dhinaca Nugaasha, halka kuwii kalana ay u kaladhaqaajiyeen nin wlaiba meeshuu u carari karay.
Maleeshiyaadkii Saaxdheer iyo Boocame ee la joogay Axmed Karaash ayaa iyagu shalay galab ka baxay Tukaraq iyagoo aaday degaamdii ay ka yimaadeen.
Somalidiidku waxaa ay magaalada Tukaraq ugu yimaadeen laba gaadhi oo kuwa dagaalka ah oo ay leeyihiin beesha Gambadhe mana caddda sababta loo qabdsaday wararka qaar ayaa sheegaya in ay cilad darteed u dhaqaaqi kari waayeen halka qaarna sheegyaan in ay garan waayeen meel ay aadaan.
Muddo markii ay magaalada ka sii maqnaayeen ayaa ay dadkii yaraa ee magaalada ku sugnaa bilaabeen in ay caruurtooda daabulaystaan isla markaana uu bilawday jahwareer oo ay dadku garan waayeen waxa dhacaya iyo cidda laga carrayo.
6:30 Subaxnimo ayaa waxa magaalada yimi gawaadhi dagaal oo u wato Xaaji Jeeniyare oo maamulka Soomalidiidka ugu magacaaban gudoomiyaha gobolka Sool isla markaana ka soo jeeda tuulada Adhicaddeyee ee waqooyiga Laascaanood.
Xaaji Jeeni yare waxaa uu watay 6 gaadhi oo kuwa dagaalka ah waxaana saarnaa maleeshiyaad ka soo jeeda degaamada Adhicaddeeye iyo Xuddun oo ka mushahar qaata maamulka Soomaalidiidka.
Markii uu waago si wacan u baryay ayaa waxa ay bilaabeen in ay shir la qataan dadkii magalaada gaar ahaan odayaashii iyagoo uu khudbad u jeediyay xaaji Jeniyare.
Wax dagaal ama xabad kama dhicin Tukaraq dadka badankisuna waxa ay garan waayeen sababta uu Axmed Karaashkii ku faanayay anigaa laandheera ah oo Nugaal ka taliya uga cararay 6 gaadhi oo ay wataan dhalinyaro uu adeer u yahay.
Qaar kale ayaa ku doodaya qorshaha mid uu wax ka ogaa ayey ahady oo wuxuu doonayay sidii ay horay u balan qaadeen kooxda Khaatumo in ay xuduuda soo xiraan oo ay Yoocada tagaan sida uu inta badan ku hadaaqo maamulka Soomaalidiidku.
8:00 subaxnimo ayaa waxaa fadhiisinkoodii oo ahaa Falaydhyaale oo 40 KM dhinaca bari kaga beegan Tukaraq ka soo guuray ciidamo dawlada Puntland ka joogay gobolka Sool waxaana ay soo degeen halka loo yaqaano Godqaboobe oo ah tuulo yar oo laamiga ku taala Tukaraqna ka xigta dhinaca bari.
Guux ayaa ka bilawday Tukaraq maleehsiyadii xaaji Jeeniyare watay waxa loo sheegay in ciidamada komaandosta ee Puntland ku soo socdaan waxaa ay bilaabeen in ay dib uga gurtaan magaalada iyagoo ka baxay Tukaraq abaaro 9:00 subaxnimo.
Muddo saacad ah markii ay ka sii maqnaayeen oo ay magaaladu isugu soo hadheen dadkii shacabka ahaa ayaa waxaa dhinaca bari ka soo fadhiistay ciidamo degaanka Tukaraq u dhashay oo ku hubaysan 9 gaadhi oo kuwa dagaalka ah waxaana ay taageero ka helayeen ciidamada Komaandoosta Puntland.
10:00 Subaxnimo ayey gudaha u soo galeen magaalada Tukaraq kuwaaso hada si rasmi ah gacanta ugu haya magaalada.
Xaalada Tukaraq ayaa degan maleeshiyadii Khaatumo ayaa afarta jiho u kala carartay Axmed Karaash maanta wuxuu ku sugnaa meel ku dhaw Tuulada Caroolay iyadoo wararkii u dambeeyna ay sheegayaan in uu makhribkii caawa galay Taleex isagoo wata 4 gaadhi kaliya.
Tukaraq wax xabad ah kama dhicin
Qof kuma dhiman lagumana dhaawicin
Axmed Karaash isagoon xabad cirka u ridin ayuu ka cararay
Somalidiidku markii ay ogaadeen in Puntland ku soo dhawaatay ayey ka baxeen.
Maleeshiya beeleedkii Saaxdheer iyo Boocame waxa ay Tukaraq ka tageen shalay (15.06.2012) galab iyagoo ku laabtay deegaamdooda.
Tirada guud ee Tukaraq ka taalay waxa ay ahayd 25 gaadhi hase haate waa ay kala yaaceen oo mid waliba jiho ayuu aaday :-
5 gaadhi oo ay lee yihiin Saaxdheer iyo Boocame shalay galab ayay ka baxeen oo ay tuulooyinkooda aadeen.
2 gaadhi oo uu mid watay Afgaab Somalidiidka ayaa Tukaraq ka kaxaystay.
7 Gaadhi waxaa ay u carareen dhinaca Boocame hase haate 2 ayaa Boocame ku sugan .
5 ka mid ah 7 Boocame u carartay waxa ay maanta duhurkii yimaadeen wadada u dhaxaysa Falaydhyaale iyo Godqaboobe ka dib markii ay ka baqeen in Somalidiidku ka daba yimaadaan maadama laba ka mid ahi ay horay uga soo baxsadeen Mahad Cambaashe oo ay aad uga baqayaan in uu mar qabto, waxaana ay u gudbeen dhinaca Nugaasha ciidamada Komaandosta Puntland wax dhibato ah uma aysan gaysan.
4 Axmed Karaash watay caawa ayuu la galay Taleex
7 waxa ay ku shidaal beeleen bartamaha Nugaal halkaas oo uu Axmed Karaash kaga cararay.
In Somalidiidka iyo Khataumo wada socdaan waxaa daliil cad oo markhaati ma doonta u ah arimahan:-
Khatumo waxaa ay todobdkii la soo dhaafay ku qaylinaysay ciidamo ka yimi Garowe oo Falaydhyaale yimi iyagoo aan marna soo hadal qaadin kuwa Somalidiidka ee Higlada fadhiyay.
Falaydhyaale 40 KM ayey u jirtaa Tukaraq halka Higladuna u jirto 8 KM.
Khaatumo waxaa ay tidhi “xuduuda ayaan soo xiraynaa oo Yoocadaan tagayanaa” “maamulka Majeerteeniya” erayadaasi ayaa ah kuwa hal hays u ah Somalidiidka.
Khaatumo waxa ay dishay isbuucii ay Tukaraq haysatay 5 qof oo laba ka mid ahi ahaayeen darawalo Mudug iyo Galgaduud ka soo jeeda.
Khaatumo waxaa ay gadiid laga qabsaday u celisay beelaha Isaaq.
Khaatumo waxaa ay dishay laba darawal oo Majeerteen iyo Duduble ah halka kuwa Isaaqna la siiyay ciidamo ilaaliya.
Khaatumo waxa ay dishay laba nin oo yidhi war aynu ka hadalno dagaalka inagaga soo socda Somalidiidka.
Khaatumo waxaa ay Tukaraq ka baxday iyadoo aan xabad cirka u ridin.
Khaatumo waxa ay wadatay 25 gaadhi halka Somalidiidku watay 5 gaadhi.
Maleeshiyada Khataumo teegeersan ee Saaxdheer iyo Boocame waxa ay Tukaraq ka baxeen shalay (15.05.2012) galab iyadoon aan wax weerar ah ku iman.